Ogaden News Agency (ONA) – Falastiiniyiinta Gaza oo Dalbanaya In Maxamuud Cabaas oo Iscasilo.
Falastiiniyiinta Gaza oo Dalbanaya In Maxamuud Cabaas oo Iscasilo.
Banaanbax balaadhan oo shacabka reer Falastiin ee Gaza ay Axadii qabteen ayey ku codsadeen inuu xilka iska casilo Madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas.
Mr. Cabaas ayaa lagu eedeeyey in uu cadaadis dhaqaale saaray maamulka Xamaas ee ka taliya Gaza. Maxamuud Cabaas oo la doortay sanadkii 2005 ayaa xilkiisa ku ekaa 2009, balse illaa iyo hada laguma guuleysan in la qabto wax doorasho ah.
Xiisada u dhaxeysa xisbiga Cabaas ee Fatax iyo Xamaas ayaa muddo dheer soo jiitameysay, Xamaas ayaa iyadu awood militari kula wareegtay maamulka Marinka Gaza sanadkii 2007, halka Fatax ay weli ka taliso Daanta Galbeed ee wabiga Urdun oo ku hoos jirta dhulka Israel heysato.
Inkastoo Xamaas maamusho Gaza ayey hadana saaran tahay xayiraad bad iyo beri ah oo ay dul dhigeen ciidamada Israel, xayiraadaasi oo soo socotay muddo ka badan 10 sano ayaa dhaawac weyn u geysatay dhaqaalaha shacabka Gaza, waxaana usii dheer cadaadiska uga imaanaya maamulka Maxamuud Cabaas oo mushaharaadkii ka jaray shaqaalaha ka shaqeeya Gaza ee hoostaga maamulka Xamaas.